एक वर्षभित्र भन्सार कार्यालयहरूमा ई–पेमेन्ट प्रणाली शुरू हुने – Nepal Press
एक वर्षभित्र भन्सार कार्यालयहरूमा ई–पेमेन्ट प्रणाली शुरू हुने
२०७७ पुष ९ गते १६:५०
काठमाडौं । भन्सार विभागले एक वर्षभित्र देशभरिका भन्सार कार्यालयहरूलाई ‘फेसलेस’ गरिने बताएको छ । भन्सार विभागका अनुसार ‘फेसलेस’ अर्थात् भन्सार कार्यालयका कर्मचारी र व्यापारीबीच सम्पर्क नभई ई–पेमेन्टबाटै कारोबार हुनु ।
भन्सार विभागका निर्देशक शिशिर घिमिरेका अनुसार ई–पेमेन्ट प्रणाली कार्यान्वयनमा आएपछि व्यापारीले देशका जुनसुकै ठाउँबाट पनि ई–पेमेन्टबाट भन्सार शुल्क तिर्न सक्नेछन् । अहिले व्यापारीहरूले भन्सार कार्यालयमै पुगेर भन्सारले तोकेको बैंकमा नै पैसा बुझाउने गरेका छन् ।
यसरी ई–पेमेन्टबाट भन्सार शुल्क बुझाउँदा व्यापारी र भन्सार कार्यालयलाई धेरै कुरामा फाइदा पुग्ने बताउँछन् निर्देशक घिमिरे । उनका अनुसार यो प्रणालीले पहिला त व्यापारीलाई फाइदा पुग्छ, जस्तो व्यापारीले पैसा बोकेर भन्सार कार्यालयकै क्षेत्रमा भएको बैंक जानु पर्दैन ।
पैसा वा चेक बोकेर भन्सार पुग्नुपर्ने झन्झटबाट व्यापारी मुक्त हुन्छन् । साथै समयको बचत हुन्छ । यस प्रणालीबाट भन्सार कार्यालयले पनि आफूलाई लागिरहने दागबाट मुक्त गर्न सक्छ ।
जस्तो भन्सार कार्यालयका कर्मचारीले व्यापारीको मिलोमतोमा भन्सार शुल्क कम गरेर सामान पठाउँछन् भन्ने आरोपलाई ई–पेमेन्ट लागूले निर्मूल गर्नेछ । ई–पेमेन्ट लागू भएपछि व्यापारीले आफ्नो सामान कहाँ छ ? कस्तो अवस्थामा छ ? भन्ने कुराको जानकारी आफैंले ल्यापटपमा हेरेर थाहा पाउन सक्छ ।
भन्सार विभागको सहकार्यमा अर्थ मन्त्रालयले वाणिज्य बैंकहरूसँग ई–पेमेन्ट प्रणालीका लागि छलफल गरिरहेको छ । र, यसै वर्ष लागू हुने योजनामा विभाग रहेको छ ।
निर्देशक घिमिरेका अनुसार अहिले भन्सार कार्यालयले रिक्स इन्डिकेटरका आधारमा तीन किसिमले भन्सार जाँच गरी सामान नेपाल भित्र्याउने गरेको छ । यसमा रेड, ग्रीन तथा एल्लो च्यानल प्रयोग गरी सामान भित्र्याइन्छ ।
रेड च्यानलमा रहेका सामानहरू भन्सारले सबै एक–एक गरी खोलेर हेर्छ । एल्लो च्यानलका वस्तु हेरिंदैन त्यसको डकुमेन्ट हेरिन्छ । ग्रीनमा सामान र डकुमेन्टेशन दुवै हेरिंदैन ।
प्रकाशित: २०७७ पुष ९ गते १६:५०